Wasiirrada Maamulka Puntland Oo Lagu Dhaariyey Garowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirrada Maamulka Puntland Oo Lagu Dhaariyey Garowe
Garowe – Mareeg.com: Golaha wasiirrada cusub ee Puntland ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Maxkamadda sare ee Puntland ayaa 40 xubnood oo ka tirsan golaha waxay ku dhaarisay kitaabka Qur’aanka kariimka ah.
Madaxweynaha ayaa wasiirada cusub kula dardaarmay inay dhowraan hantida dadka iyo dalka ee ay maamuli donaan, wuxuu sheegay in lays kula xisaabtami doono hantida lana hubin doono shilin walba iyo meesha uu ku baxay, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxaan balan qaadney isbeddel, isbeddelkii u horeeyeyna waa doorashadayadii iyo idinka, dhaarta maanta la idin dhaariyey ayaa isbeddelkii bilowdey, waxaad ku dhaaratena waad ogtihiin dhaartiina fuliya” ayuu yiri Dr Gaas.
Dr. Gaas oo ka dardaarmay dhowrista hantida dalka ayaa yiri “Waxaan balanqaadnay inaan hubin doono qof kasta oo xil qabta hantidiisa, farsamadeeda waan la imaanaynaa waana ka dhabaynaynaa arintaas.”
Madaxweyne Gaas ayaa wasiirada ugu baaqay inay shaqo wanaagsan qabtaan isla markaasna fuliyaan wixii loo idmaday, isagoo alle uga baryey inuu la garab galo shaqada adag ee hortaala.
“Wasaarad kasta siyaasadeeda iyo maamulkeeda idinka ayaa la idika sugayaa, wixii taageero ah ee aad anaga nooga baahataan si waafi ah ayaad nooga helaysaan shaqadiinana xor ayaad u tihiin.” ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli Gaas.
Baarlamanka ayaa la horgeyn doonaa golaha wasiirada cusub maalmaha soo socda si ay codka kalsoonida u siiyaan, Madaxweyne Gaas ayaana rajo wanaagsan ka qaba in xukuumadiisa la meel-marin doono marka ay hor tagto wakiilada, sida uu saxaafada u sheegay jimcihii shalay.
Kulanka maanta lagu dhaariyey inta badan xubnaha golaha wasiirrada Puntland waxaa goob-joog ka ahaa madaxweynaha, ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka Puntland.
Golaha wasiirrada maamulka Puntaland oo ka kooban 47 xubnood oo isugu jira wasiirro, wasiisu-dowleyaal iyo wasiir ku xigeenno ayaa la magacaabay dabayaaqadii bishii tagtay ee January.
Unified State of Somalia Debated at Chatham House